15 “Mene nokware bobe no,+ na m’Agya ne okuafo no.+ 2 Baa biara a ɛwɔ me ho a ɛnsow aba no, oyi fi hɔ,+ na ebiara a ɛsow aba no, oyiyi ho+ na atumi asow aba pii.+ 3 Esiane asɛm a maka akyerɛ mo nti, mo ho atew dedaw.+ 4 Montena me mu, na me nso mentena mo mu.+ Sɛnea baa no ankasa ntumi nsow aba gye sɛ ɛtena bobe no mu no, saa ara na mo nso muntumi nsow aba gye sɛ motena me mu.+ 5 Mene bobe no, mone baa no. Nea ɔtena me mu na me nso metena ne mu no, ɔsow aba pii;+ efisɛ minni hɔ a, muntumi nyɛ hwee. 6 Sɛ obi antena me mu a, wotwa no kyene sɛ baa na ewu; na nnipa boaboa mmaa no ano kogu ogya mu ma ɛhyew.+ 7 Sɛ motena me mu na me nsɛm tena mo mu a, mummisa biribiara a mopɛ na ɛbɛyɛ hɔ ama mo.+ 8 Nea ɛhyɛ m’Agya anuonyam ne sɛ mobɛkɔ so asow aba pii na moada mo ho adi sɛ m’asuafo.+ 9 Sɛnea Agya no dɔ me+ na me nso medɔ mo no, montena me dɔ mu. 10 Sɛ mudi m’ahyɛde+ so a, mobɛtena me dɔ mu sɛnea madi Agya no ahyɛde so+ na mete ne dɔ mu no. 11 “Maka eyi akyerɛ mo na m’anigye atena mo mu, na mo anigye ayɛ mã.+ 12 M’ahyɛde ne sɛ monnodɔ mo ho sɛnea medɔ mo no.+ 13 Obiara nni ɔdɔ a ɛsen eyi, sɛ obi de ne kra bɛto hɔ ama ne nnamfo.+ 14 Sɛ moyɛ nea merehyɛ mo no a, na moyɛ me nnamfo.+ 15 Seesei memfrɛ mo nkoa bio, efisɛ akoa nnim nea ne wura yɛ. Na mmom mafrɛ mo nnamfo,+ efisɛ nea mate afi m’Agya hɔ nyinaa mama moahu.+ 16 Ɛnyɛ mo na mopaw me, na mmom me na mepaw mo, na mayi mo sɛ monkɔ nkɔsow aba+ na mo aba no ntena hɔ; ɛno na sɛ mubisa Agya no hɔ biribiara me din mu a, ɔde bɛma mo.+ 17 “Eyinom na mehyɛ mo na ama moadodɔ mo ho.+ 18 Sɛ wiase tan mo a, munim sɛ atan me ansa na ɛretan mo.+ 19 Sɛ moyɛ wiase no fã a, anka wiase bɛpɛ nea ɛyɛ ne de no asɛm.+ Nanso esiane sɛ monyɛ wiase no fã,+ na mmom mapaw mo afi wiase nti, wiase no tan mo.+ 20 Monkae asɛm a meka kyerɛɛ mo no, akoa nsen ne wura. Sɛ wɔataa me a, wɔbɛtaa mo nso;+ sɛ wɔadi m’ahyɛde so a, mo nso wobedi mo de so. 21 Nanso me din nti na wɔbɛyɛ eyinom nyinaa atia mo, efisɛ wonnim nea ɔsomaa me no.+ 22 Sɛ mamma ammɛkasa ankyerɛ wɔn a, anka wonni bɔne;+ nanso seesei de, wonni wɔn bɔne ho anoyi biara.+ 23 Nea ɔtan me no tan m’Agya nso.+ 24 Sɛ manyɛ nnwuma a obiara nyɛɛ bi da wɔ wɔn mu a,+ anka wonni bɔne;+ nanso seesei wɔahu na wɔatan me ne m’Agya nyinaa.+ 25 Nanso ɛno na ɛbɛma asɛm a wɔakyerɛw wɔ wɔn Mmara no mu no aba mu sɛ, ‘Wɔtan me kwa.’+ 26 Sɛ ɔboafo a mɛsoma no afi Agya no nkyɛn,+ nokware no honhom a efi Agya no hɔ no, nya ba a, ɔno na obedi me ho adanse;+ 27 na ɛsɛ sɛ mo nso mudi adanse,+ efisɛ mo ne me atena fi bere a mifii ase.